Translator: Ravi Sapkota
Locations: Charlestown, Massachusetts (USA), originally Nepal
Word Processing: Reinhard F. Hahn, Seattle & San Francisco (USA)
कुरिलो आफ्वो छाप्रो खोलाको छेउमा राख्दथेओ । एक समयमा वुडाँ भगेराहरू (दुबै) उडेर गाए । तिनीहरू खानको लागि केह्रि चाहन्थे त्यसको लागि आफ्ना बच्चाहरूलिए छोडेर गाए ।
केहे समय पछि बाँउ बारेन् आफ्नो घार गुफाँमा याए ।
के भयो येयाँ? उश्ले भन्यो! कश्ले तिमीहरूलिअ यहाँ नोक्शान पुरायो बच्चाहरू? तिमीहरू येहाँ सर्वो डराएको जस्तो ढेकिन्चौ ।
उंह बुबा! उनीहरूले भने यहाँ येउता ठूलो झिउ भएको (राक्षस) मान्छे एक्चिन औगाडि आएको थेयो । उँ उश्सयै डर लाग्दो थेयो । उष्ले हाम्नो गुध्मा हरेतो र उश्कोढूलो रातो आँखाले हामिलै नराम्रो सुँग डर ढेखायो ।
हो म धेक्दै चु । बाँउ रेन्ले भने – कहाँ त्यो गयो तँ?
खै! उनिहरूले भने – उ त्यो बात तिर गये तल जहा काथरू छन ।
पख यहाँ । बाउ रेन्ले भने, म उस्को पछाडि जान्चु । तिमीहरू नआतिउ बच्चाहरू, म उस्लै समातेर लाउचु । येति भनेपचि उ आफ्नो गुड बात उड्न थाल्त्यो ।
उ काट र कुनाकाप्जा तिर उड्यो, कहे समय पछि उ सिंहको माथि चड्यो ।
तर कुरिलो एक रति पनी डाराएको थेओ । उँ सिंहको पछाडि चदेर थोक्न थाल्यो । तिमी कुन कारन्ले मेरो आयौ र मेरो बच्चाहरूलाई थर्सायौ?
तर सिंहले त्यो चरालाई कुनै पनि जबाब ढेएको तेयेन खालि उ आफ्नो बातो हिडिरहेको थेओ ।
त्येती भएपछि पनि रेन्ले सिंहलाई झन बचेरा झर्पान (बोक्न) थाल्यो । बच्च थाहापायेच! तिमीहरूलाई थहाँ जाने कुनै कमनै थियेन! तर पनि फेरी फेर्कोर आयौ भने, उष्ले भनौ! हेरा के हुन्च तिमीले ढेख्ने छौ । म यो गर्न दिन्न । येति भनेर आफ्नो येउता खुत्ता उचाल्यो तर मैले तिम्रो पछाडि घाँउ एकै दिन्मा बनाने छु ।
त्येती भनेपछि उ आफ्नो गुँड्मा फ़र्केर गयो ।
हेर बच्चाहरु! उष्ले भन्यो, मैले त्यो डर्लाग्दो । सिंहलाई राम्रो पाठ पदाए । अब्ह उ साहास गरेर येहां आउने छैन ।